I-Wholesale VMC420 China 3 axis cnc umshini wokugaya wensimbi Umkhiqizi Nomphakeli |Lu Young
I-vmc420 China 3 axis CNC umshini wokugaya wensimbi iyimishini yokucubungula okuzenzakalelayo eyakhiwe ngesisekelo semishini yokugaya ejwayelekile.Lolu hlobo olusha lwethuluzi lomshini lunezinzuzo zokuguquguquka okuqinile, ukunemba okuphezulu kokucubungula, ikhwalithi yokucubungula ezinzile kanye nokusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu.
1. Ukusakaza: Izinhlaka ze-HT300 ze-resin ezikwazi ukumelana nesihlabathi zinokuminyana okuphezulu nokumelana nokugqokwa okuhle!Isihlalo sehhashi samukela isakhiwo sokulingisa esinezendlalelo ezimbili.
2. Umshini ungenziwa ngokwezifiso, isistimu ingakhetha i-GSK, Siemens noma i-Fanuc CNC system.
3. Isikulufu somhlahlandlela: sebenzisa isikulufu se-JIS-C3 sokugaya esifakwe ngaphambili esicindezelekile ukuze uqede ukuhlehla.
Usayizi wethebula (mm)
Ubukhulu, umthwalo (kg)
Ukuhamba kwe-X eksisi(mm)
Ukuhamba kwe-Y axis(mm)
Ukuhamba kwe-Z axis(mm)
Ibanga ukusuka ekhaleni lokuphotha ukuya etafuleni (mm)
Ibanga ukusuka enkabeni ye-spindle ukuya
Umzila wekholomu (mm)
Imbobo ye-taper ye-spindle
Isivinini esikhulu sokuphotha (Rpm)
X,Y,Z Izinga lokuphakelayo elisheshayo (m/min.)
isivinini sokusika ngokushesha (mm/min)
Ukunemba kwesikhundla mm
Phinda ukunemba kwendawo mm
Ingcindezi yokusebenza Mpa
1. High amandla resin isihlabathi casting
Indlela yokuqondisa eqinile
Uhlelo lwe-GSK /SIEMENS/FANUC CNC Controller
Isigqoko se-bamboo 12 Amathuluzi Isishintshi sethuluzi elizenzakalelayo
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukucubungula indiza ehlukahlukene eyinkimbinkimbi, izingxenye ezigobile nezigobolondo, njengokugaya amakhamera ahlukahlukene, isikhunta, izinduku zokuxhuma, izindwani, ama-propeller namabhokisi.Ingabuye ibhojwe, inwetshwe, futhi ihlelwe kabusha., Ukuthepha, ukubhoboza izimbobo, njll.
1. Khipha ibhokisi lepulangwe le-plywood elingenafumigation.
2. I-steel base plate, iqine kakhulu.
3. Yenza umsebenzi omuhle wokuvikela umswakama nokuvikela amanzi.
Okwedlule: ck0640 Mini metal gang uhlobo ithuluzi umnikazi umshini cnc lathe
Olandelayo: VMC650 High speed 3 eksisi mpo umshini wokugaya insimbi cnc
SM205 Swiss uhlobo umsebenzi ogcwele cnc lathe machin...
XK7125 mpo 3 axis cnc umshini wokugaya nge...
BC6063 izinga okusezingeni eliphezulu metal shaper umshini
XK7124 Umshini wokugaya omncane wokunemba okuphezulu okuphezulu kwe-cnc
I-CK6132 Umbambi wamathuluzi wohlobo lwegenge enembile...